Inobungane, I-Farmhouse Ethokomele e-Idyllic Family Farm
Patton, Pennsylvania, i-United States
Itholakala epulazini lomndeni wethu—qaphela igama lomgwaqo!—sisanda kulungisa indlu yasepulazini ukuze sengeze izinsiza zesimanje nesitayela entembweni yayo yasekuqaleni. Noma yimaphi amafasitela amaningi amakhulu anikeza umbono wamadlelo epulazi, amachibi, izihlahla zama-apula namagquma. I-Prince Gallitzin State Park ingaphansi kwemizuzu emihlanu phansi komgwaqo. Uvulandi wokugoqa unikeza indawo enomthunzi ukuze uphumule noma ujabulele ukudla ngaphandle. Futhi, nakuba isikhala kungesakho, sihlala ngaphesheya kwegceke uma udinga noma yini.
Kukhona indawo yokupaka ngaphandle komgwaqo etholakalayo yezimoto ezifika kwezintathu. Iwasha nokomisa kuyatholakala ekhishini, okugcwele amabhodwe, amapani, amashidi amakhukhi, isitsha sokuxuba, njll. Siphinde sinikeze ama-condiments ayisisekelo kanye nesisekelo sokubhaka, kanye nekhofi netiye. Kunezindawo zokudlela ezimbili: izitulo ezine zamabha esiqhingini sasekhishini kanye netafula lokudlela lomlotha elenziwe ngezandla elikhulu egunjini lokudlela elihlala abantu abayisishiyagalombili. Amanye amakamelo amabili esitezi sokuqala ahlinzeka ngezikhala zokufunda, ukubuka imuvi (eyakho noma ekhethwe kuma-DVD ethu esiwakhethile), noma ukudlala umdlalo webhodi (esikukhethile, noma owodwa oze nawo). Isikebhe siyatholakala ukuze usisebenzise, uma ufuna ukugwedla uzungeze ichibi epaki yezwe elingumakhelwane, okuyindlela enhle ngempela yokuchitha intambama. Futhi sinemihlahlandlela etholakala nemithetho yendlu kanye nencwadi yezivakashi ephakamisa ezinye zezindawo esizithandayo esingaya kuzo ukuze sithole ukudla nemisebenzi. Phezulu kunamagumbi okulala amane, wonke anesihlalo kanye nekhabethe noma enye indawo yokulengisa izingubo. Kukhona umatilasi womoya wesivakashi sesishiyagalombili. Yize kunendlu yokugezela eyodwa kuphela "yeqiniso", kukhona thina eWestern PA esikubiza ngokuthi "imbiza yasePittsburgh" engaphansi. Yilapho abavukuzi bamalahle nabasebenzi bensimbi beshawa khona ngaphambi kokungena endlini. Indlu yangasese neshawa ziyasebenza, kodwa ngokusobala isikhala asisihle neze njengendlu yokugezela yangaphezulu. Izivakashi zamukelekile ukusebenzisa igumbi lokugezela elingaphansi uma zithanda. Umpheme unefenisha ye-patio ethokomele kanye namakati anobungane asezinqolobaneni athanda ukunakwa!
I-Prince Gallitzin State Park inikeza izindawo eziningi ezinhle zokuhamba, izinhlanzi, ibhayisikili, nesikebhe / i-kayak. Imigwaqo eminingi yasemaphandleni eduze nepaki ilungele ukuhamba, ukugijima, nokuhamba ngebhayisikili. Singaphesheya kwechibi ukusuka e-La Ferme Rouge kanye nemizuzu eyi-15-30 ukusuka kumathiyetha ama-movie amabili ahlukene. I-Allegheny Portage Railroad National Historic Site kanye neHorseshoe Curve kusele imizuzu engama-20-25 kuphela kanti iJohnstown Flood Museum kanye neJohnstown Incline kuqhele ngemizuzu engama-45.
Sihlala endlini engaphesheya kwegceke futhi sizokuvumela ukuthi wenze ibhizinisi lakho. Nokho, uma kukhona okudingayo, sicela ungangabazi ukusithumelela umlayezo, noma vele ungqongqoze emnyango. Siyajabula ukukusiza nganoma yini oyidingayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Patton namaphethelo